चैतन्य मिश्र -
क्यास्ट्रोलाई महान नेताको पगरी!
मुराहरि पराजुली -
क्यास्ट्रोको सनकलाई कल्पनाशीलता मान्ने, उनको दम्भलाई गौरव मान्ने, उनले गरेका दमनलाई नजरअन्दाज गर्दै महान नेताको पगरी गुथाउने गल्ती हामीले गर्न हुँदैन। उनलाई महान भन्ने हो भने महानताको परिभाषा फेर्नुपर्छ। आफूले मस्ती गरेर जनतालाई सास्ती दिने सबै ठालुहरूलाई महान नेता भन्नुपर्छ।
रामदेवको व्यापार मोडल
भर्खरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय उद्यमी योगी रामदेवको प्रत्यक्ष लगानी रहेको भनिएको पतञ्जली आयुर्वेद प्रालिको उद्घाटन गरिन्। योगगुरु रामदेवले काठमाडौं ओर्लिनेबित्तिकै उक्त उद्योगमा आफूले हालसम्म १०० करोड (१ अर्ब भारु) लगानी गरिसकेको दाबी गरेका थिए। तर, उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि स्वीकृति नै नलिइएको खुलेपछि हतारहतार रामदेवले आफूले लगानी गर्ने योजना मात्र बनाइरहेको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
नागरिकको धैर्यको परीक्षण नगर्नुस्, महँगो पर्नेछ
अहिलेको निकासको एउटै बाटो छ, खनियाँ र डा. सिंहले तुरुन्त राजीनामा दिने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको बाँकी कामका लागि अविलम्ब कदम चाल्ने। भविष्यमा राजनीतिक हस्तक्षेपबिना वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रबन्धको ग्यारेन्टी गरौं। त्यसमा न डा. केसीको असहमति रहन्छ न त कुनै विवेकशील नागरिकको। राजनीतिक पहुँचका भरमा नियुक्ति गरेर संस्थाहरूलाई धरासायी बनाउने काम भने अब सधैंका लागि बन्द हुनैपर्छ।
मेरो पहिचान: देखाउँ कि लुकाउँ?
डा.मित्र परियार -
चियापसलामा, कतिपय देवालयमा, निजी घरमा मैले बढो सिद्दान्तवादी भएर सत्य बोलुँ वा व्यवहारिक बनेर आफ्नो जात ढाटुँ? पहिचानको जगेर्ना गर्ने निहुँमा जिउधनको जोखिम मोल्ने कि तत्कालका निम्ति पहिचान लुकाएर संभावित खतराहरूबाट मुक्त हुने? अर्थात्, मलाई समाजले, धर्मले, राजनीतिले ठेलेर यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ कि आफ्नो पहिचान आँफैलाई विषवृक्ष बनेको छ। यसलाई मैले जगेर्ना गरौँ कि भाँचेर मिल्काउँ?
व्यक्तिकेन्द्रित एजेन्डा किन?
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलसितको मिलेमतोका कारण गलत काम गर्ने पदाधिकारीहरु यति हौसिएका छन्, अहिले यत्रो विवाद र बहसबीच सिधै नयाँ घोटाला गर्ने दुस्साहस गरेका छन्। हिजो (मंसिर १२ गत) मात्र केयुले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई चिठी लेखेर विदेशी विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्न अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको प्रावधानै हटाएको छ। सैद्धान्तिक रुपमा धेरै पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको यो प्रावधान निजी मेडिकल कलेजहरुको दबाबका कारण लामो समय रोकिएर अघिल्लो वर्ष मात्र कार्यान्वयनमा आएको थियो।
डा.केसीको अनसन र सत्याग्रहको भविष्य
शरद चन्द्र पौडेल -
केसीद्धारा सुरु गरिएको आन्दोलनलाई सफल बनाउन लाग्नै पर्दछ। के सी असफल हुदा नैतिकता र सदाचारको तगत पराजित हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रतिको मानिसको विश्वास डग्मगाउछ र हिंसामा विश्वास गर्नेहरु सल्वलाउछन्। त्यसैले समय मै सबै सचेत बनौ, के सीको पक्षमा उभिन ढिला नगरौ। यसवाट के सीलाई वचाउन पनि सकिन्छ, चिकित्सा क्षेत्रमा सूधारलाई दिगो वनाउन पनि सकिन्छ।
दाहालः विश्वासको ढोका खोल!
दि राज्य र यसका दोश्रो हस्ताक्षरकर्ता दाहाल शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गो लगाउँन गम्भीर छन् भने हालको एकपक्षीय मानसिकताबाट मुक्त हुँनु पर्छ। अहिले मडारिएका विश्वासको संकटलाई ताड्ने हिम्मत उनले गर्नु पर्छ। किनभने शान्ति प्रकृया विश्वासको जगमा अडेको हुन्छ। यसका लागि नेतृत्वबर्ग र राज्यले उचित वाताबरण बनाउँनु पर्छ। सत्य निरुपण र वेपत्ता सम्बन्धि छानविन आयोगको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संसोधन हुनुपर्छ। सर्वच्च अदालतले दिएका फैसलाहरुलाई त्यसले अंगीकार गर्नु पर्दछ। रामाअआ र अदालतले गरेका सिफरिस र फैसला विना कुनै वाहाना कार्यन्वयन भएको देखिनु पर्छ।
किन अलपत्र परे हाम्रा विश्वविद्यालय?
मनप्रसाद वाग्ले -
जबसम्म विश्वविद्यालयको जिम्मा कसको भन्ने प्रष्ट हुँदैन तबसम्म हाम्रो उच्च शिक्षाको हालत यो भन्दा पनि पातलो हुँदै जान्छ। सबैखाले पदाधिकारीहरू जागिरे मानसिकताबाट ग्रसित छन्। उच्च शिक्षाको हालत दिन प्रतिदिन खस्कँदै छ। प्राध्यापकको नियुक्तिदेखि पठनपाठनसम्म लथालिङ्ग छ। जो सत्ता र नेताको वरिपरी घुम्यो उसैको वर्चस्व कायम छ। सक्कली प्राज्ञ अटाउन नसक्ने स्थिति छ। राजनीतिले थिलोथिलो बनाएको हाम्रो उच्च शिक्षालाई कसैले पनि स्वामित्व नलिने वा उत्तरदायित्व नलिने हो भने हाम्रो विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार नै हुन्छ।
नुनिलो पानी पिएर कसको तिर्खा मेटिएको छ र?
विजय कुमार -
तिम्रो पुस्ता अहिलेकोभन्दा छिटो गतिमा परिवर्तन चाहन्छ भने- देखाऊ ल्याकत् , उठाउँ नयाँ झण्डा, गर एउटा नयाँ जन-आन्दोलन। हामी पनि त हेरौं यो नयाँ पुस्ताको दम असली हो वा भर्च्यूअल हो? पुरानो पुस्ताको दुःखले ल्याएको परिवर्तनको खाटमा सुतेर देखिएका नयाँ सपनाहरूको कुनै अर्थ छ र सुनयना?
फेसबुकले ट्रम्पलाई जित्न कसरी सघायो?
जेनेप टुफेकी -
फेसबुकमा गलत समाचार तथा सूचना कसरी फैलन्छ, कति फैलन्छ, त्यो कसले लेख्छ, कसले पढ्छ र त्यसले कति प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्यांक फेसबुक कम्पनीसँग मात्र छ। तर दुर्भाग्य, फेसबुकले उक्त तथ्यांकलाई पूर्ण नियन्त्रण राखेको छ, उसले स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तालाई त्यसमा पहुँच दिँदैन। उसको व्यवहार भनेको हानिकारक चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनीले मानिसका स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्य तथा अस्पतालका सारा रेकर्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुजस्तै हो।
हामी दुई दर्जाका नागरिक
राज्यले कुनै नेता वा नागरिकलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिने नै हो भने त्यो कार्य नियम, कानुन वा कार्यविधिले निर्देशित हुनुपर्छ। त्यो कार्यविधि नेताका हकमा एउटा, जनताका हकमा अर्को बनाउन पाइन्न। नेता र नेतृत्व भनेको विषेशाधिकार होइन, जिम्मेवारी हो।
त्यत्रो लडाइँ लडेको मानिस डीन नियुक्तिलाई लिएर अनशन बस्न सुहाउँछ?
अरू केही नभए पनि आइओएम चलाउन दिनभर होशमा रहने र कार्यालय समयभर परिसरभित्र टिक्ने व्यक्ति हुनु अनिवार्य हुन्छ । जसले बाहिर क्लिनिक चलाएर, आफ्नो सबै जसो समय र ऊर्जा उतै खर्च गरेर त्यहाँका गम्भीर वा गालपारा बिरामी ल्याएर टाउको जोगाउने ठाउँ आईओएमलाई बनाएका छन् वा जसलाई नशाका कारण आफ्नै टाउको धान्न गाह्रो छ, डीनजस्ता पदहरु उनीहरुलाई टीका लगाएर दिइनु हुँदैन ।
बीस वर्ष पुरानो जीर्ण बसमा कोचिएर यात्रा गर्नु र पहिले कहिल्यै त्यस खालको अपरेशन देख्न समेत नपाएको डाक्टरसित अपरेशन गराउनु फरक कुरा हुन् । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अपवाद मानेरै व्यवहार गर्नुपर्छ र यो क्षेत्रमा गुणस्तरमा हुने सम्झौता सह्य हुनुहुँदैन ।
‘इम्पेरिअल’ चीनको संवेदनशीलता
कतै चीनलाई जानाजानी चिढ्याउने काम भइरहेको त छैन भन्ने आमनागरिकको आशंका नाजायज छैन। अहिले रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको भए, नेपाल र तिब्बतबीच ट्रान्समिसन लाइन कहाँबाट लैजाने भनेर नापनक्सा तयार हुँदै गरेको भए, पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको भए वा काठमाडौंमा यी सहमति र सम्झौता लागू गर्न लगातार बैठक तथा छलफल मात्र अघि बढेका भए आशंकाले ठाउँ पाउने थिएनन्। देउवा उपस्थित कार्यक्रममा सांगे पनि उपस्थित थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ हुने थिएन।
झन्डै आधा कोठा नै देखिने त्यो फोटोमा नेपालका तर्फबाट देउवा पति–पत्नी दुई जना मात्र छन्, जबकि भारत तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोबल, विदेश सचिव जयशंकर र अरू दुई जना अधिकारी छन्। दोबल आफ्नो हातमा ‘नोट’ लिएर बसेका थिए। दुई जना भारतीय अधिकारी ‘नोट’ टिपिरहेका थिए। देउवा पति–पत्नीसँग भने न बोल्नका लागि ‘नोट’ थियो न त ‘नोट’ टिप्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको कुनै कर्मचारी नै त्यहाँ थिए। देउवाले त्यहाँ के भने भारतको अफिसियल रेकर्डमा रहन्छ, मोदीले के भने देउवाको दिमागमा कति रेकर्ड हुन्छ थाहा छैन, तर नेपालको रेकर्डमा रहन्न।
शुभेच्छालाई मेरो शुभेच्छा
सुदीप श्रेष्ठ -
जहाँसम्म प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भन्ने दुबिधा छ, न्यायभन्दा ठूलो प्रक्रिया होइन। हुन पनि सक्दैन। कोही अन्यायमा परेको जान्दाजान्दै प्रक्रियाका नाममा आँखा चिम्लनुलाई विधिसम्मत आचरण मान्न सकिन्न। त्यो त लाचारीपूर्ण व्यवहार हो, जुन नागरिक सेवा गर्न खटिएका पनौती नगरका सरकारी कर्मचारी र जनताको सेवा गर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक नेताहरूले देखाएका छन्। यत्ति कुरा मनन् गर्ने हो भने उनीहरूलाई शुभेच्छा घिमिरेका सम्बन्धमा निर्णय लिन कुनै दुबिधा हुने छैन।
लोकतन्त्रको आवरणमा उदाएका मोदी र ट्रम्प
जिम्मेवारीको प्रकृति वा यसको व्यवस्थापनको शैली नेता अनुसार फरक होला, तर विकसित देशका नेताले “मलाई विश्वको चासो छैन, आफ्नो देशलाई बलियो बनाउँछु” भन्नु गैरजिम्मेवारी र बेइमानी हो। यही सोच हाबी हुन जाँदा बहुसंख्यक बेलायती जनताले जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिर निस्किने पक्षमा मत हाले।
महाभारतमा के छ?
प्रदीप गिरि -
परम्पराले महाभारतलाई इतिहास भनेको छ। प्रचलित भाषामा इतिहासको भिन्न अर्थ लाग्छ। आधुनिक इतिहासमा तिथिमितिको बडो महत्व हुन्छन्। महाभारतलाई त्यस दृष्टिले इतिहास भनिएको होइन। सनातन परम्परामा इतिहास भन्नाले इतिं+ह+आसका रूपमा अर्थ्याउने गरिएको छ। यस्तो इतिहासको सोझो तात्पर्य छ– यो सधैं भइरहने कुरा हो। महाभारतमा यस्तै नै सधैं भइरहने घटनाहरूको साहित्यिक दृश्यावली छ।
महाभारतको प्रारम्भमा केही विचित्र उपाख्यान राखिएको छ। आदि पर्वका प्रारम्भिक पृष्ठमा नै नाग–गाथाका माध्यमबाट ‘अहिंसा परमो धर्म’ को उद्घोष छ। लगत्तैपछि जनमजेयको नाग–यज्ञ सुरु हुन्छ। सतही रूपमा हेर्दा नाग–गाथा र नाग–यज्ञ कथाको महाभारतको कुरुक्षेत्रसँग सम्बन्ध देखिँदैन। तर, यो सम्बन्ध नबुझ्दासम्म महाभारतको नैतिक र धार्मिक पक्ष साक्षात्कार हुँदैन।
महाभारतका पात्रहरूका निमित्त पुनर्जन्म एउटा सत्य थियो। कल्पना थिएन। महाभारतका पात्रहरू अवतार वा पुनर्जन्मका वाहकका रूपमा क्रियाशील छन्। पुनर्जन्ममा विश्वास नराख्ने व्यक्तिले महाभारतको आनन्द उठाउन गाह्रो छ। यस्तो दृष्टिले ग्रीसका दुखान्तिका वा शेक्सपियरको नाटकमा पनि आनन्द पाउने छैन। आफूलाई इतिहास भन्ने यस कृतिले पौराणिक शैलीका माध्यमबाट सत्यको दिग्दर्शन गराएको छ।
राजकीय रात्रिभोजको स्वाद
बंगाली मूलका भारतीय राष्ट्रपतिलाई नर्वेजियाली साल्मोन माछाको परिकार। त्रिशूलीकै सगर माछा वा जनकपुरकै रऊ कति निको हुन्थ्यो होला। लप्सीको अचार, गुन्द्रुक। काठमाडौं उपत्यकाको नेवारी खाना आफैँमा कति सम्पन्न छ। नभए थकाली खानाका नामले लोकप्रिय पहाडी थाल। हिमाल, पहाड र तराईका तीनथरी प्रतिनिधिमूलक स्वाद छानेर परिकार परिष्कार गरेको भए नेपालीहरू आफ्नोपनप्रति गर्व गर्छन् भन्ने भान त पार्न सकिन्थ्यो। नेपाली परिकार प्रवर्धन गर्ने पहिलो उच्च कूटनीतिक परिपाक त्यस्सै सेलायो।
हाम्रो सार्वभौमिकताको अकुण्ठित प्रयोगको सर्त
नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्ध हामीले चाहेर पनि अर्को मुलकसँग स्थापित गर्न सम्भव छैन। तर, त्यही विशिष्ट सम्बन्धको अभिन्न अंशका रुपमा नेपालमाथि नियन्त्रणको आफ्नो हक रहेको भारतले ठान्ने गरेको छ। चीनसँगको हाम्रो भौगोलिक पहुँच नबढेसम्म भारतसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मानमा आधारित र सन्तुलित बन्न सक्ने छैन भन्ने इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको छ। उदाउँदो आर्थिक महाशक्ति चीनसँग हाम्रो भौगोलिक पहुँच र सघन आर्थिक सम्बन्धको विषय हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको पूर्ण प्रयोगसँग जोडिएको छ।
मुखर्जी भ्रमणको मर्यादा
भारतीय उच्च भ्रमणबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा भन्दा पनि सत्कार कसरी गर्ने भन्नेमा जोड गएको छ ।
त्यो लहडले काठमाडौं सत्तालाई लघुताबोधले ग्रस्त देखाएको छ। मुखर्जीको भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन पहिलो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्नु त्यसकै परिचायक हो।
शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निश्कर्ष मानिएको संविधान अपूरो रहेको स्वीकार्ने निर्माताहरूले नै मधेसी दललाई ढिलै भए पनि समाहित गर्न वार्ताको कल्याङमल्याङ बाक्लो पारेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निश्कर्षमा नेपाल पुगेको मुखर्जीलाई देखाउने चेष्टा नै किन नहोस्?
तर गर्ने भन्दा पनि देखाउने चेष्टा हाम्रो स्थायी पहिचान नै भइसकेको छ।
विदेशी सहयोगका आयोजना गणतन्त्रकालमै समेत फत्ते हुने उत्साह बढेको छैन । भारतसँग त्यसै पनि ठूला पूर्वाधार सहयोग योजना कुनै उल्लेखनीय छैनन् । कुनै एउटै आयोजना उद्घाटन गर्ने अवसरसमेत मुखर्जीले सायदै पाउँदैछन्।
हाम्रो जस्तो गरिबी र नैतिकताको धरातल भएको देशमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तो अपरिमित र बेलगाम अधिकार बोकेको संस्थालाई संवैधानिक अंगका रूपमा राखिनु उचित हो वा होइन?
अख्तियारले निलम्बन गरेपछिका मेरा हजार दिन
सञ्जय नेपाल -
भ्रष्टाचार आरोपमा जागिरबाट निलम्बन भएको एक वर्षसम्म ७० वर्षीय बुबाले मसँग बोलचाल गर्नुभएन। बुबालाई यही लेखमार्फत् भन्न चाहन्छु, मुद्दा लाग्दैमा कोही भ्रष्टाचारी हुँदैन। हिजो तपाईंको छोरालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर निलम्बनको आदेश दिने लोकमान सिंह कार्की आज आफैं निलम्बनमा परेका छन्। परमात्मा उनका पनि छन्, मेरा पनि छन्। ती एकै हुन्। तिनले हेर्छन् र हेरे पनि।
कुन कांग्रेसले जित्ने?
लोकमानले अदालतविरुद्ध हुलहुज्जत गर्दासम्म एक शब्द नबोलेका कांग्रेसका केही नेतालाई संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि अदालतको मानहानीको चिन्ता लागेको छ। उनीहरूले लोकमानको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले बोल्न नहुने तर्क गरेका छन्। लोकमानविरुद्ध संसदमा महाअभियोग र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फरक विषय हुन्।
अख्तियार प्रमुखबाटै अदालतको आदेश अवज्ञा हुँदा पनि संसद किन मौन?
राधेश्याम अधिकारी -
अदालतको आदेशको खुल्लमखुल्ला अवज्ञा भएको छ, कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। तर, यस विषयमा समाचार प्रेषित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरू कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ। यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ, निर्धालाई अदालत चाहिन्छ। दुःखका बेलामा यो संसदमा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरूलाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको अडामा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ। तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिँड्न प्रयत्नरत छ, त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने?
प्रचण्ड, सी जिनपि‍ङ र मोदी भेटको अर्थ
ओली सरकार भारतलाई अनावश्यक रूपमा 'चिढ्याउन' अग्रसर थियो, दाहाल सरकार भारतलाई अनावाश्य रुपमा 'रिझाउन' अग्रसर देखिन्छ। यी दुबै सरकारले भारत र चीनसँग गरेका व्यवहार नेपालको दीर्घकालीन हितले कम र पार्टी तथा नेता विशेषको तत्कालको आवेग र स्वार्थ धेरै निर्देशित थिए, छन्।
दक्षिण एसिया पूर्वतिर सर्किँदा
भारतको केही वर्षयता ‘लुकिङ इष्ट’ विदेश नीति नै छ। नारा दिन सिपालु प्रधानमन्त्री मोदी ‘एक्ट इष्ट’ भन्दैछन्। हामी दिल्लीमा जम्मा हुँदा उनी दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका नेताहरूको लाओस् शिखर सम्मेलनमा थिए।
द्वन्द्व मुद्दामा दाहालको फेरिएको बोली
चरण प्रसाईं -
दोस्रोटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि दाहालले द्वन्द्वकालका घटनामा कारबाही हुनु हुँदैन भनेर वकलात गरेका थिए। जब दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने विगतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा माफी हुन नसक्ने भनाइ सार्वजनिक गरे। तर, सेनाको भेलामा पुगेर फेरि उल्टो कुरा गरे। उनले पीडितको न्यायप्राप्ति अधिकारप्रति सवाल उठाए।
रोकिएको अनशन र फड्को मारेको अभियान
बदलिएको नेपाल देख्ने हुटहुटी बोकेर संसारभर पसिना बगाइरहेका नेपालीहरु अब उहाँसँगै एकसाथ चलायमान हुनेछन् । मेरो विचारमा त यो अभियान लोकमानलाई फालेर पनि रोकिने छैन, या त यो देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना करतुतहरुका लागि पूर्ण उत्तरदायी बनाएर रोकिने छ, त्यो सम्भव भएन भने तिनको विकल्प आउने अवस्था सिर्जना गरेर यो रोकिनेछ ।
दलहरू पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट नियन्त्रित छैनन्
नीलकण्ठ उप्रेती -
क्षेत्रीय पार्टीको कुरा गर्दा एउटा मधेसवादी दल विभाजित भएर २० वटा पार्टी बनेका छन्। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट एक दर्जनभन्दा बढी दल बनेका छन्। उनीहरूको विभाजन विचार र सिद्धान्तका आधारमा भएको होइन। जसरी पनि संसदमा निर्वाचित भएर मन्त्री बन्दै आफ्ना नजिकका मानिसको फाइदा र अवसर सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको विकासका कारण हो। यसको अन्त्यका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कायम गर्नु आवश्यक छ।